पार्टी विघटनदेखि आत्महत्याका कुराः किन बर्बराउँदै छन् प्रचण्ड ? | वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक |
पार्टी विघटनदेखि आत्महत्याका कुराः किन बर्बराउँदै छन् प्रचण्ड ?
बुधबार मात्र प्रचण्डले माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनको कार्यक्रममा पुगेर आफूमा आत्महत्यासम्मको सोच आउने गरेको खुलासा
काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड केही समययता अस्थिर र विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । उनका विवादास्पद अभिव्यक्ति पार्टीकै कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकहरुलाई नै अन्त्याउने खालका छन् ।
बुधबार मात्र प्रचण्डले माओवादीनिकट विद्यार्थी संगठनको कार्यक्रममा पुगेर आफूमा आत्महत्यासम्मको सोच आउने गरेको खुलासा गरे । उनले सबै आत्महत्या खराब नहुने भन्दै यसलाई पनि महानताकै रुपमा व्याख्या गरे । यही क्रममा उनले मार्क्सको परिवारमा पनि आत्महत्या भएको प्रसंग पनि उठाए र त्यसलाई पनि साहसिक कामको संज्ञा दिए ।
आत्महत्या नेपालको कानुनले बर्जित गरेको छ । नेपालमा इच्छामृत्युको व्यवस्था पनि छैन । अरुलाई आत्महत्या गर्न प्रेरित गरेमा दुरुत्साहनको मुद्दा लाग्छ । यस्तो कानुन बनाउँदा प्रचण्ड पनि संसदको सदस्य एवं माओवादी संसदीय दलको नेता नै थिए । तर, प्रचण्डको बिहीबारको अभिव्यक्ति कार्यकर्तालाई पनि आत्महत्या गर्न उक्साउने खालको थियो । यही कारण उनको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
केही समययता प्रचण्डले शृंखलाबद्ध रुपमा यस्तै विवादास्पद र विचलनपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् । आफ्नो पार्टीमा सबै मन्त्री बन्न चाहेको कुराले पनि उनले ठूलै तनाव भएको बताएका थिए । आफ्ना ४९ जना सांसदहरुले नै मन्त्री बन्न खोजेको, त्यसबाट छानेर चार–पाँचजनालाई मन्त्री बनाउन कठिन भएको उनको गुनासो थियो । उनको भनाइ थियो, ‘मेरो दिमागभित्र आतंक छ । म मानसिक तनावमा छु ।’असार २९ गते बनेको देउवा सरकारमा माओवादीले दुईजना मन्त्री मात्र पठाएको छ । अरु तीनजना जति थपिन सक्ने आकलन छ । उनले माथिको अभिव्यक्ति दिएको साउन ९ गते हो । अहिले अढाई महिना बितिसक्यो, देउवा सरकार बनेको । तर, मन्त्रिमण्डल बिस्तार हुन सकेको छैन । प्रचण्डको तनाव बढ्दै गएको उनका अभिव्यक्तिहरुबाट पुष्टि हुन्छ ।
केही दिनअघि उनले पार्टी नै विघटन गर्न मन लागेको बताएका थिए । ‘कति दिन ढाँटेर, छलेर पार्टी चलाउनु ? यसलाई विघटन गरिदिए हुन्छ,’ भदौ १८ गते वाग्मती प्रदेश कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले भनेका थिए ।त्यसको १० दिनपछि अर्को एक कार्यक्रममा उनले पार्र्टी दिनदिनै दुब्लाउँदै गएको र अब आफू एक्लिनुपर्ने पो हो कि भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको बताएका थिए । पार्टीभित्र बिचौलिया प्रवृत्ति हावी भएको, जसले पनि कमाउन मात्र खोज्ने, आफूसँग घुर्क्याउन आउने, गुटबन्दी गर्ने भन्दै आफू मातहतका नेता–कार्यकर्तासँग उनले गुनासो पनि गरे ।
यसरी हेर्दा प्रचण्ड अहिले निकै विचलित र विक्षिप्त अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । रामबहादुर थापा, पोष्टबहादुर बोगटी, लेखराज भट्ट आदि प्रभावशाली नेताहरुले साथ छाडेपछि प्रचण्डलाई निकै ठूलो तोड परेको छ । खासगरी भट्टले साथ छाडेकामा प्रचण्ड बढी तनावमा छन् । थापाले यसअघि नै पार्टी नै फुटाइसकेर पुनः पार्टीमा फर्केकाले उनीप्रति प्रचण्डको खासै ठूलो अपेक्षा थिएन । बाबुराम भट्टराईले पार्टी छाडेर जाँदा अब झेल्नु नपर्ने भयो भन्दै प्रचण्डले खुसी नै मनाएका थिए । त्यस्तै नेत्रविक्रम चन्दप्रति कटाक्ष गर्दै कसैले प्रचण्डको नक्कल गर्न खोज्दैमा वास्तविक प्रचण्ड बन्न नसक्ने भनेका थिए ।
३२ वर्षदेखि पार्टीमा एकछत्र नेतृत्व गरेका प्रचण्डले आफूलाई चुनौती दिने हरेक नेतालाई पाखा लगाएका छन् । अहिले उनीसँग राजनीतिक नेता कम, चैते माओवादी बढी छन् । हरेकले तत्काल नाफा खोजिरहेको छ । प्रचण्डसँग हरेकले मोलमोलाइ गरिरहेको छ । त्यसकारण पनि उनी खिन्न भएका छन् । एमालेजस्तो सशक्त र प्रतिस्पर्धी कम्युनिस्ट पार्टीलाई छिन्नभिन्न पार्न सकेकामा खुसी मनाउन सकिरहेका छैनन् । बरु राष्ट्रिय राजनीतिक पटबाटै विलुप्त हुने संकेत प्रचण्डले देखेका छन् । पछिल्ला उनका अभिव्यक्तिको सार यही बुझिन्छ ।